Ikhaya | Ukukhulula Ikhambi
Project Water United
Yiba Umuntu Ofuna Ukuba Ngempela!
Ithuluzi lakho eliphelele lokuziphendukela kwemvelo okuzazi komuntu.
Sika izingqimba zokuphendula-okunesimo kanye nokuziphatha, futhi ube yilokho oyikho ngempela.
I-Alchemical zintathu iyithuluzi lokuxazulula ikhambi lokuguqula amandla amasha elenzelwe ukukunika amandla okuba yilokho obekuhloswe ukuba yikho.
UZiqu-zintathu uqukethe amakhambi amathathu e-alchemised vibrational:
Blue Lotus ikhambi
Le makhambi amathathu asebenza ngokubambisana ukusula lokho okusibophayo. Elinye lalamakhambi linendima eyingqayizivele okufanele idlalwe ekususeni ngokuphelele isimo senhlalo, amaphethini kanye nezinkumbulo ezisigcina sibambekile ezinkolelweni nasekuziphatheni okungasisebenzisi.
THOLA IZIPHUMA ZESIFUNDO
Ngiyavuma Ukukhulula I-Remedy ukuqoqa imininingwane yami kuleli fomu.
Ubuchwepheshe be-Ancient Alchemical For Age Age
Ukukhulula kusetha izinga elisha lendawo yokuthuthukisa abantu kanye namathuluzi okukhulisa ukuqonda. Inhlanganisela yasendulo yamakhemikhali e-alchemical evusiwe futhi akhuliswa ngobuchwepheshe besimanje esitholiwe, okwenza impilo entsha ibe nethuluzi elinamandla futhi elijulile elisebenzayo kodwa eliphuthumayo ithuluzi lokuvusa.
Ikhambi elihamba enkulumweni ikhono layo lokusekela abantu ekusebenziseni kwengqondo, umzimba nomphefumulo ngokusebenzisa ukuhlanzwa kwezimpawu zakwaKarmic kanye ne-debris ngokomzwelo ngokomzwelo. Ukuba mahhala kulezi zinhlanzi ezinamandla kunika amandla okugcina eyodwa ukuze sonke sibe yilokho esasihloselwe ukuba khona kusukela ekuqaleni, ekhululiwe futhi ekhululekile.
Ukulandela izindlela zokupheka zasendulo, izithako zemvelo ezikhethiwe ngokucophelela, izakhi kanye nama-alchemical mixings eyenzelwe iminyaka yobudala.
Ukukhulula kuthinta emasikweni asezindaweni zasendulo nezangcwele. Lokhu kukhulisa amandla amandla okuhlanza kwengqondo nangokomzwelo.
Ukuhlanganisa amanzi omhlaba ngokuvumela ukukhululeka ukunambitha futhi kuxubaniswe nemifula engcwele yezwe ukuxhuma bonke ndawonye.
Yini Abanye Abathola Ukukhululeka?
Yizwani okushiwo abanye ngokuphathelene nokuhlangenwe nakho kwabo ngokukhululeka. Izimfanelo zokuguqulwa ezingeni lomzimba, engqondweni, ngokomzwelo nangokomoya!
Ubuchwepheshe bekusasa lasendulo
Izimfihlo zadala, zivezwe.
Ubuchwepheshe obungokomoya nobuhle be-alchemical budala indlela entsha yokwandisa nokuguqula impilo yomuntu. Ukukhulula kusebenzisa ubuchwepheshe obusanda kutholakala ngefomula yasendulo, okwenziwa manje kubantu bonke.
ukugxila, amandla nokulinganisela
Uma ukugxila kungasetshenziswanga ekusebenziseni i-patterning endala ekhishwe emzimbeni sikwazi ukuletha wonke amandla ethu ukuba athwale kunoma yimuphi umsebenzi. Kusho ukuthi asisebenzisi isikhathi sethu sokuhlala esikhathini esedlule noma sikhathazeke ngekusasa. Lokhu kuguqulela ekudeni okuncane emzimbeni, nathi kudingeka silale kancane uma sishukumisela ngokushesha nokungena ekuphumuleni.
Phuma endala, yenza indawo entsha
Uma sesihlanza ukujwayela okujwayele ukuthi sihlanganyele njengengxenye yomlando wethu futhi sifunde inkumbulo, asisabanjwa emidlalweni yomzwelo yempilo yethu. Ukukhululeka lokhu lokhu ngokukuletha konke ukubonakala, ukuzwa futhi ukukhishwa kanye. Khona-ke imizwelo ingavela ngokujwayelekile ngaphandle kwesibopho esivela esikhathini esedlule ukuze siphendule nganoma iyiphi indlela futhi singakwazi ukuzibandakanya nabo noma cha ngaphandle kokuthambekela kokubanjelwa esicupheni sabo esilula kakhulu.
Sine-ke ithuba lokukhipha i-lotus emanzini ngaphandle kokuwela.
Gcwalisa Ukucaca Kwemvelo
Buyela ekhaya esimweni sakho semvelo
Hlanganisa amandla ngaphakathi kwalokho okucacile ngokuqondisa kwakho, injongo nenjongo kulokhu kuphila. Ukukhulula kusekela umuntu ekuvulekeleni ukucaca kwangaphakathi, kusiza ukuxhuma nekhampasi yangaphakathi, kuqondisa eyodwa kuwo wonke umzuzwana ngendlela yokuchichima, ukunethezeka nokujabula.
Ukukhululeka Kwakho, Kulindeleke.
I-Spectrum ephelele ye-Alchemical Formula
Umshini ophelele wezithako, ukulungiswa ngokucophelela, ukuhlelwa kabusha nokuhlanganiswa ukwakha, UKUBHALA.
Ukubunjwa kwe-alchemical yasendulo eyenziwe ngamagugu e-9 okwenziwe ngawo izikhathi ezingu-100 ukuze kukhishwe amandla okuhlanza nokujula okujulile okuvuselelayo.
I-mineral ehlanze amanzi futhi isebenze njengesihlangu sombane. Njengoba igazi lingamanzi amaningi kunomthelela ojulile futhi onamandla egazini eliphethe ingqondo yethu.
Uthuli luqoqwe futhi lungaba khona emlilweni we-4 oye waqhubeka ngokuqhubekayo iminyaka engu-50 yokugcina. Umlilo wesihlanu yilanga. Lo mlo umelela ukugxila kwe-distilled kweminyaka engamashumi amahlanu yokuguqulwa nokuhlanza.
Umsindo ozwakalayo we-Durga wokuguqulwa noshintsho, okuvumela ukuba izenzakalo ziveze ngokushelela njengoba izinto zicacile
Idala ukushiya okuncane okufana nengane kokuthokozela okulula izinto ezincane, umuzwa wengane ebukele i-butterfly okokuqala.
I-mushroom e-adaptogenic esiza ukubopha zonke izithako ndawonye, ​​ebafaka ekucaleni nasekulinganiseni
Ukusakazwa inkululeko ngokusebenzisa inethiwekhi yabasakazi bezendawo kanye nezomhlaba jikelele. Ukuxhuma amandla, emanzini kanye nabantu bomhlaba ngokusebenzisa le nqubo enamandla.
Uhlelo oluhlanganisiwe lwamanzi
Amakhambi Obuthathu Be-Alchemical
I-Diamond Yokuhlenga - 10ml
CAD: I-97.50C $
CAD: I-132.60C $
Ukuhlengwa - 10ml
CAD: I-54.60C $
I-Blue Lotus - 10ml
CAD: I-32.50C $
Inkululeko - 10ml
CAD: I-50.70C $
I-Disclaimer Medical Disclaimer
© Copyright 2018 All rights Reservation LiberationtheRemedy.com Izitatimende ezikule webhusayithi azihloliwe ngabaphathi bezokudla nezidakamizwa. Noma imiphi imikhiqizo okuxoxwe ngayo noma ekhangisiwe ayenzelwe ukuthola ukuthi kunasifo noma yisiphi, ukuselapha, ukusiqesa noma ukusivimba. Imiphumela yobufakazi ayiyona eyejwayelekile. Amakhasimende kungenzeka ukuthi asithole isitifiketi sezipho ngemuva kokuhambisa ubufakazi bawo. Uma ukhulelwe, unesi, udla imishanguzo noma unesimo sezokwelapha, thintana nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa noma yisiphi isengezo sokudla. ^ Ukunikezwa okushicilelwe kuleli sayithi, kufaka phakathi amacebo we-AutoShip, kusebenza kumakhasimende athengisayo kuphela, hhayi abadayisi noma abathengisi bezitolo abathengisa izinto ezithile. Ukunikezwa kwamahhala kokuthumela kusebenza kumakhasimende e-US kuphela.